Raysal wasaare Khayre oo Dhuusamareeb gaaray - Tilmaan Media
Waxaa magaalada Dhuusamareeb ee caasumadda Galmudug gaaray raysal wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya Xassan Cali Khayre iyo wafdi lasocda. Madaxwaynayaasha Galmudug iyo Jupaland ayaa raysal wasaaraha kusoo dhaweeyay garoonka Dhuusamareeb.
Safarka Raysal wasaaraha ayaa daba socda go,aamadii kasoo baxay shirkii madaxda dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka Soomaaliya ee ay kamid ahayd in shirkale oo madaxda federaalku joogaan Dhuusamareeb lagu qabto.
Waxaa haatan Dhuusamareeb kusugan madaxda dowladaha xubnaha ka ah Dowladda Federaalka marka laga reebo madaxwaynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo Garoowe uu aaday ka qayb qaadashada aaska madaxwaynihii hore ee Puntland Maxamed Cabdi Xaashi iyo Raysal wasaarihii hore ee Soomaaliya Xassan Abshir Faarax.
Waxaa lafilayaa in raysalwasaare Xassan Cali Khayre uu kulamo layeesho madaxda iyo ururada bulshada ee kusugan Dhuusamareeb inta uu halkaas ku suganyahay.
Sidoo kale waxaa lafilayaa in uu magaalda Dhuusamareeb soo gaaro madaxwaynahay Dowladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo si uu wada xaajoodka looga hadlayo arrimaha doorashooyinka dalka oga qayb qaatto.